မိုဘိုင်းရှာဖွေမှု၏ကြီးထွားလာလွှမ်းမိုးမှု | Martech Zone
လက်ကိုင်ဖုန်း ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိခြင်းသည်အမှန်တကယ်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။ ယနေ့ခေတ် web developer များအနေဖြင့်ရောင်းအားမတက်သင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သုံးစွဲသူများဆိုဒ်များ၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းများကိုလပေါင်းများစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည် 10 ည့်သည်များ၏ ၁၀% ကျော်သည်မိုဘိုင်းပစ္စည်းဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ On Martech Zoneမိုဘိုင်းကိရိယာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှု ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွားအလာ၏ 20% ကျော် မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်စက်မှလာသည်!
မိုဘိုင်းဝက်ဘ်သည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသောအွန်လိုင်းနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်ထားသောစမတ်ဖုန်း ၄ ဘီလီယံကျော်၏နေအိမ်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှုသည် desktop traffic ကိုကျော်တက်လိမ့်မည်ဟုစာရင်းဇယားများကဖော်ပြသည်။ မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်ကိုင်ပါစေ၊ ပရိသတ်သည်မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ပေါ်တွင်ရှိနေပြီး၎င်းတို့ကိုသင်ဆက်သွယ်သင့်သည်။
မိုဘိုင်းလည်ပတ်မှုများတွင်အထူးသဖြင့် web visit ည့်သည်နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်သို့ဆင်းသက်လာသောမိုဘိုင်းရှာဖွေသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့လာရောက်လည်ပတ်သည်သို့မဟုတ်သူတို့ဝယ်တော့မည့်ဝယ်ယူမှုကိုသုတေသနပြုလေ့ရှိသည်။ AlchemyViral ကဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်အချက်အလက်တွေစုစည်းထားတယ် မိုဘိုင်း optimization အပေါ် infographic.
Tags: alchemyviralinfographicမိုဘိုင်း infographicမိုဘိုင်း optimizationမိုဘိုင်း optimizationမိုဘိုင်းရှာဖွေမှုမိုဘိုင်းရှာဖွေရေး statsမိုဘိုင်း seoseo
Google Fetches ဆိုတာဘာလဲ?